အကောင်းဆုံး အချိန်အခါ ရောက်လာပါပြီ!
FBSတွင် ဖောက်သည်တော်ပေါင်း ၅သန်းအထိ ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် FBSအဖွဲ့သားများအားလုံး ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်နေကြပါသည်. မကြာခင်မှာတော့ ငါးသန်းမြောက်ဖောက်သည်တော်ဖြစ်လာသည့် ကံထူးရှင်တစ်ယောက်ကတော့ အလွန်ပဲဝမ်းသာရတော့မှာပါ. ဘာလို့လဲဆို အမှတ်တရအဖြစ် ကံထူးရှင်များကို လက်ဆောင်ပေးအပ်နေကြမို့ဖြစ်ပါသည်. ဥပမာပြောရပါက ၄သန်းမြောက်ဖောက်သည်တော်အား မော်တော်ဆိုင်ကယ်အသစ်တစ်စီး လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်.
ဒါကြောင့်ပဲ ဘယ်သူကများ FBSကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုဆုလက်ဆောင်ကို ရရှိသွားမလဲဆိုတာကို သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ သိရှိသွားအောင် မြန်မြန်လေး ပြောပြပေးလိုက်ပါ! ဘယ်သူကများ ၅သန်းပြည့် ဖောက်သည်တော်ဖြစ်လာတာပါလဲ?! စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ!